Barcelona Oo Heshay Xiddig Man City Ah, Lixda Kooxood Ee Aguero Doonaya, Arsenal Oo Khad Dhexe Keenaysa & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa - Laacib
HomeBundesligaBarcelona Oo Heshay Xiddig Man City Ah, Lixda Kooxood Ee Aguero Doonaya, Arsenal Oo Khad Dhexe Keenaysa & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa
Barcelona Oo Heshay Xiddig Man City Ah, Lixda Kooxood Ee Aguero Doonaya, Arsenal Oo Khad Dhexe Keenaysa & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa
May 2, 2021 Apdihakem Omer Adam Bundesliga, PSG, Serie A, Suuqa Kala Iibsiga, Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka La Liga, Wararka Premier League 0
Everton ayaa kooxaha kala ah Chelsea, Leeds United, Tottenham, Barcelona iyo Inter Milan kula biirtay tartanka loogu jiro saxeexa 32 sano jirka Man City ee Sergio Aguero oo qaab bilaash ah lagu heli karo xagaaga. (Star on Sunday)
Manchester United ayaa suuqa xagaaga sanadkan iibin doonta Paul Pogba haddii uusan 28 sano jirkaasi heshiis cusub u saxeexin kooxda. (Sun on Sunday)
Mohamed Salah ayaa sheegay in Liverpool aysan wali kala hadal wax heshiis kordhin ah, heshiiskiisa hadda ee Anfield ayaa 2023 ku eeg. (Sky Sports)
Arsenal ayaa aaminsan inay 24 sano jirka khadka dhexe ee kooxda Brighton ee Yves Bissouma 30 Milyan oo pound ku heli karto. (Star on Sunday)
AC Milan ayaa indha-indhaynaysa xaalada 23 sano jirka kooxda Chelsea ee Tammy Abaham oo sidoo kale West Ham United lala xidhiidhinayo. (Standard)
Tababaraha Belgium ee Roberto Martinez ayaa lala xidhiidhinayaa kusoo laabashadad horyaalka Premier League, Tottenham oo tababare la’aan ah ayaa xaaladiisa la socota. (Sun on Sunday)
Sidoo kale tababaraha Fulham ee Scott Parker ayaa lala xidhiidhinayaa inuu bedeli doono Tottenham oo uu ku laaban doono Spurs oo uu laba sano kasoo ciyaaray. (Football Insider)
Tababaraha Bayern Munich ka tagaya ee Hansi Flick ayaa doonaya inuu la wareego xulka qaranka Germany marka uu Joachim Low ka tago kaddib Euros mana aha mid wax xiiso ah u qaba inuu Tottenham maamulo. (Sport1 – in German)
Sergio Ramos ayaa wali inuu heshiis cusub oo laba sano ah u saxeexo ka doonaya kooxdiisa Real Madrid oo iyadu kaliya hal sano usoo bandhigtay. (Marca)
Heshiiska uu goolhaye Gianluigi Donnarumma kula joogo AC Milan ayaa ah mid dhacaya xagaaga, wakiilkiisa Mino Raiola ayaa wadahadalo uu 22 sano jirkaasi ugu biirayo Juventus la yeeshay madaxda kooxdaas. (Calciomercato – in Italian)
Tababaraha Juventus ee Andrea Pirlo oo mustaqbalkiisa kooxda wax laga weydiiyay ayaa sheegay inuu la hadlay mulkiilayaasha kooxda isla markaana uusan wax wer-wer ah ka qabin mustaqbalkiisa. (Goal)
Tababaraha Arsenal ee Mikel Arteta ayaa rajaynaya inuu kooxda fursad uu isku muujiyo ka siiyo 21 sano jirka khadka dhexe ee Joe Willock oo qaab amaah ah wacdarro ugu dhigaya Newcastle United. (Shields Gazzette)
Arteta ayaa sidoo kale sheegay inay wadahadalo heshiis kordhin ah la furayaan 20 sano jirka khadka dhexe ee ree England ee Emile Smith-Rowe. (Sky Sports)
Aston Villa ayaa qorshaynaysa heshiis rasmi ah oo ay ugu dhaqaaqayso saxeexa 23 sano jirka daafaca dhexe ee Man United ee Axel Tuazebe kaas oo hore qaab amaah ah ugu soo ciyaaray.. (Football Insider)
Wakiilka daafaca Man City ee Eric Garcia ayaa ku dhaw inuu heshiis rasmi ah la gaadho kooxda Barcelona oo uu 20 sano jirkaasi qaab xor ah ugu biirayo marka heshiiskiisu dhaco bisha June. (Mundo Deportivo)